Posted by: chhepyastra weekly | जनवरी 30, 2012
पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढेको छ
नेत्रविक्रम चन्द , विप्लव’, स्थायी समिति सदस्य- एनेकपा माओवादी
० पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि तपाइर्ंहरू प्रशिक्षण कार्यक्रममा एक भएर प्रस्तुत हुनुभएको छ, के साच्चै पार्टीभित्रको विवाद टुङ्गएिकै हो त ?
यसमा दुईवटा पाटाहरू छन्, एउटा नमिलेका कुराहरू छन्, एउटा मिलेका कुराहरू छन् । नमिलेका कुरा दुईवटै दस्तावेजमा आ-आˆनो ठाउामा राखेर केही साझा निष्कर्षहरू, निर्णयहरू गरेका छौा, त्यसलाई हामीले साझा प्रस्ताव भनेका छौ । मिलेको कुरा यही हो । त्यसमा मुख्यतः नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा, तत्काल, पार्टीले लागू गर्ने कार्यनीति र कामकारवाहीलाई अगाडि बढाउन तयार गरिएको कार्ययोजना नै हो । यी तीनवटा विषयमा हाम्रो सहमति भएको छ ।
० यसरी आˆनो पार्टीभित्रै शंकाको स्थितिमा तपाईंहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाउन सक्नुहुन्छ र ?
आजको नेपालमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई पहलभित्र लिनु निकै महत्वको कुरा हो । हाम्रो ख्यालमा अहिले हामीले जे पास गर्यौ, त्यही कुराले जनतालाई अस्पष्टता भएका विषयहरू, आशंका भएका विषय र चिन्ता भएका र गरेका विषयहरूलाई प्रस्ट्याउन सकिन्छ भने हामीलाई परेको छ किनकि जनतामा मुख्यतः माओवादी पार्टी कता जाला भन्ने अन्योलता थियो, त्यसलाई हामीले माओवादी पार्टी जनवादी क्रान्ति पूरा गर्ने दिशातिर नै अगाडि बढेको छ भन्ने स्पष्ट पारेको छौा । दोस्रो भर्खर लागू गर्ने भनेका चाहिा जनताको संविधान निर्माण गर्नको निमित्त प्रयत्न गर्ने, भएन भने जनतालाई विद्रोहको निम्ति तयारी हालतमा राख्ने र तेस्रो कुरा, अहिले जनताको संविधान र राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्धमा जुन षड्यन्त्रहरू भएका छन्, त्यसविरुद्धमा जागरण अभियानहरू चलाउने भन्ने स्पष्ट छ । यी कुराहरूले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
० चार बुादे सहमति र सेना समायोजन प्रक्रियाविरुद्ध तपाईंहरूले चर्को आवाज उठाउनु भएको थियो, यस विषयमा केन्दि्रय समिति केही नबोलेकोजस्तो देखियो नि होइन ?
होइन, यसमा हाम्रो दुईवटा दृष्टिकोण छन् । प्रचण्ड र बाबुरामले हामीले ठीकै गरेका छौा भन्ने पेस गर्नुभएको थियो । हामीले त्यो गल्ती भयो, त्यो आत्मसमर्पणतिर जाने खतरा भयो भन्ने राखेका थियौा । यो दुईवटा विषय कार्यकर्तासम्म जान पाउाछ । यसमा अहिले भर्खर एउटाले अर्कोको प्रस्ताव वा दृष्टिकोण स्वीकार गरेको स्थिति छैन ।
० तर, तपाईंहरूले भनेजस्तो कार्यकर्ता तहसम्म पुग्दा कामकारवाही त टुङ्गसिक्ने अवस्था छ नि, होइन र ?
हो, यो पनि सत्य हो । कैयौ कुराहरू कार्यान्वयनको तहसम्म जाने सम्भावना पनि छ । त्यसैले हामीले अहिले विवादित विषयहरूलाई कार्यान्वयन नगरौा भनेर सहमति गरेका छौ ।
० बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई फिर्ता बोलाउने भनिएको थियो । अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । के यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनेतिर लाग्नुभएको त होइन ?
चार बुादे र सात बुादे सहमतिको आधारमा संगठित भएको यो सरकारको सन्दर्भ समाप्त भइसकेको छ । अब नया आधारहरूमा सरकार निर्माण गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । यो कुरा बाबुराम आफैाले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।
० सरकारले हालै ल्याएको सुशासनको कार्ययोजना पार्टीभित्र छलफल भएर सहमतिमा ल्याइएको हो ?
सरकार र पार्टीको बीचमा तालमेल नबन्नु नै हाम्रो पार्टीको सबभन्दा कमजोर पाटो हो । धेरैजसो विवादहरू, धेरैजसो समस्याहरू सरकार र पार्टीबीच बनेका असमझदारीहरूले नै गर्दा भएका छन् । सरकारमा जानुपर्छ भन्नेमा पार्टी एक छ तर सरकारलाई वर्गसंघर्षको मोर्चा कसरी बनाउने र जनताका विरोधीहरूसाग सरकारमा बसेर कसरी संघर्ष गर्ने भन्ने विषय नटुङ्गनिुले धेरै समस्या पैदा गराएको छ । तथापि बाबुरामजीले ल्याउनु भएको कार्ययोजनाको ’boutमा पार्टीभित्र छलफल भएको छैन ।
० भनेपछि अहिले पनि पार्टी र सरकारबीच तालमेल हुन सकिरहेको छैन ?
सरकारको ’boutमा केन्दि्रय समितिले सरकार फर्किनुपर्छ अर्थात् सरकार नयाा ढङ्गले निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको छ । त्यसकारण यो सरकारसाग सिङ्गो पार्टी एकताबद्ध हुने भन्ने कुरै भएन ।
० सरकारले जनसत्ताको निर्णय लागू गर्ने बताएको छ, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
सरकारको यो निर्णयलाई हामीले सकारात्मकरूपमा लिएका छौा । यस’boutमा जनताले, जनवर्गीय संगठनहरूले पनि समर्थन गरिसकेका छन् । आवश्यक पर्यो भने यसको पक्षमा जनपरिचालन पनि गर्ने हाम्रो सोचाइ छ ।
० तपाईंहरू जनसत्ताबाट सुरु गर्दै जनअदालत र जनपरिषद् पनि ब्युाताउन लाग्नुभएको छ भन्ने अन्य दलहरूको आरोप छ नि, के भन्नुहुन्छ ?
मानिसहरू आ-आˆनो स्वार्थअनुरूपका कुरा उठाउाछन् । आफूलाई सनक चढेको भरमा उठाउाछन् । कुरा त्यसो होइन, सिङ्गै राज्य व्यवस्था, राज्य प्रणालीलाई जनताको हातमा ल्याउनुपर्छ भन्ने माओवादी दृष्टिकोण छादैछ । यो एक्लै बस्दा जनसत्ता बनायो, जनअदालत बनायो, जनसेना बनायो, यसले जनवादी व्यवस्थाका सामान्य आधारहरू निर्माण गरेर आएको हो । हाम्रो चाहना सहमतिमा ल्याएर दुईवटै वर्ग र दुईवटै दृष्टिकोण अटाउन सक्ने र काम गर्न सक्ने सहमतिले नै हो भन्ने हो । तर, जहाासम्म अहिले तुरुन्तै ब्युाताउने कि नब्युाताउने भन्ने कुरा यो सरकार र कााग्रेस-एमालेको रबैयामा भर पर्छ ।
० तत्कालको स्थिति हेर्दा दलहरू संविधान लेखनभन्दा अन्य विवादहरूमा अल्भिmएका छन् । यसले गर्दा समयमा संविधान बन्ने छाट देखिादैन, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
कााग्रेस, एमालेको पश्चगामी दृष्टिकोण र पश्चगामी व्यवहारको कारण जनताको संविधान बन्ने सम्भावना निकै न्यून भएर गएको छ । यसमा अझै सुधार आएको छैन ।
० के यस्तो अवस्थामा जनविद्रोह सम्भव छ ?
जनविद्रोह भन्ने कुरा केही नेताहरूको आकांक्षा र लहडमा हुने कुरा होइन, जनविद्रोह त जनताको अधिकार, जनताको चेतना र संगठित शक्तिमा भरपर्ने कुरा हो । नेपालमा जनयुद्ध भयो, जनआन्दोलन भयो, त्योबाट अगाडि सारिएको प्रस्तावहरूमा जनता सहमत छन् । यदि यी कुराहरूलाई कााग्रेस, एमालेहरूले बुझेनन् भने आˆनो अधिकारको लागि जनता सडकमा आउने कुरा, संघर्षमा आउने, विद्रोहमा आउने कुरालाई हामीले स्वाभाविक ठान्नुपर्छ ।
० तपाईंहरू आˆनो पार्टीको विवाद मिलाउन सक्नु हुन्न, देशलाई कसरी विवादमुक्त बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर प्रश्न उठाइादैछ, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
अहिले हामीले पार्टीभित्रको विवादलाई सापेक्षितरूपले मिलायौा भन्ने नै हो । एक चरणलाई माओवादी पार्टी एकताबद्ध भएर नै अगाडि बढेको छ, यसमा कुनै शंका मान्नुपर्दैन । जहाासम्म सबै विवादहरू मिल्ने भन्ने कुरा हो, एउटा पार्टीमा बहसहरू भइरहन्छ, त्यो अगाडि पनि बढिरहन्छ । मुख्य कुरा पार्टीले आˆनो रङ नबद्लोस, जनताको जिम्मेवारी नछोडोस्, नत्यागोस् र राज्यलाई रूपान्तरण गर्ने ठाउासम्म पुर्याओस् भन्ने नै हो त्यसमा हामी दृढ छौ ।